Ebe nchekwa RPM Fusion - LinuxCapable
Mgbanwe nke RPM
Otu esi etinye / Kwado RPM Fusion na CentOS 8 Stream
Wednesday, December 15, 2021 by Jọshụa James
RPM Fusion bụ ebe nchekwa ngwungwu mgbakwunye maka nkesa ụdị Rhel na EL+EPEL nke otu ndị ọrụ afọ ofufo obodo na-edobe. RPM Fusion abụghị ebe nchekwa kwụ ọtọ mana ndọtị nke ngwugwu ndabara CentOS nke enweghị ike ịgụnye n'ihi CentOS ejiri otu mmachi iwu jikọtara ya dịka…
Categories CentOS iyi Tags CentOS Stream 8, Mgbanwe nke RPM
Otu esi etinye / Kwado RPM Fusion na AlmaLinux 8
RPM Fusion bụ ebe nchekwa ngwungwu mgbakwunye maka nkesa ụdị Rhel na EL+EPEL nke otu ndị ọrụ afọ ofufo obodo na-edobe. RPM Fusion abụghị ebe nchekwa kwụ ọtọ mana ndọtị nke ngwugwu ndabara nke Almalinux nke enweghị ike itinye n'ihi na ejiri otu mmachi iwu jikọtara AlmaLinux…
Categories AlmaLinux Tags AlmaLinux 8, Mgbanwe nke RPM
Friday, December 10, 2021 Sunday, November 21, 2021 by Jọshụa James
RPM Fusion bụ ebe nchekwa ngwungwu mgbakwunye maka Rocky Linux na EL+EPEL nke otu ndị ọrụ afọ ofufo na-akwado. RPM Fusion abụghị ebe nchekwa kwụ ọtọ mana ndọtị nke ngwugwu ndabara nke Rocky Linux enweghị ike itinye n'ihi Rocky Linux ka ejiri otu iwu jikọtara ya…
Categories Nkume linux Tags Nkume Linux 8, Mgbanwe nke RPM
Monday, November 15, 2021 Monday, November 15, 2021 by Jọshụa James
RPM Fusion bụ ebe nchekwa ihe mgbakwunye maka Fedora na EL+EPEL nke otu ndị ọrụ afọ ofufo obodo na-edobe. RPM Fusion abụghị ebe nchekwa kwụ ọtọ mana ndọtị nke ngwugwu ndabara Fedora nke enweghị ike ịgụnye n'ihi Fedora nwere otu mmachi iwu dị ka Red…
Categories Fedora Tags Fedora 35, Mgbanwe nke RPM